တစ်ပတ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ချစ်တင်းနှောသင့်သလဲ..? by popolay.com
14 Jan 2020 1,093 Views
အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသား ချစ်တင်းနှောခြင်း(လိင်ဆက်ဆံခြင်း)ဟာ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား..?
ချစ်တင်းနှောခြင်းကြောင့် ရင်သားကင်ဆာ၊ ပရော့စတိတ်ကင်ဆာ(အမျိုးသားများသုတ်လွှတ်အကျိတ်) ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို လျော့ချပေးနိုင်ပြီး နှလုံးကို ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ချစ်တင်းနှောခြင်းကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ကျစေကာ ပျော်ရွှင်လန်းဆန်းတဲ့ ခံစားမှုကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ အမှန်တစ်ကယ်ရဖို့ တစ်ပတ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ချစ်တင်းနှောသင့်သလဲဆိုတာကိုတော့ သိထားဖို့ လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်သုတေသီတွေရဲ့ လေ့လာစမ်းစစ်ချက်အရ ယနေ့ခေတ်မှာ လိင်ဆက်ဆံမှုနှုန်း တရိပ်ရိပ်ကျဆင်းလာနေပါတယ်။ ၂၀၁၀ ကနေ ၂၀၁၄ ထိ စစ်တမ်းဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ထိ စစ်တမ်းနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါက လိင်ဆက်ဆံမှုနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် ၉ ကြိမ်လောက် လျော့သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုလျော့ကျမှုနှုန်းဟာ တစ်မိုးအောက်မှာ အတူနေထိုင်ကြတဲ့ လင်မယားတွေကြားမှာပါ ဖြစ်ပေါ်နေတာပါ၊ သူတို့တွေဟာ တစ်နှစ်မှာ ၁၆ ကြိမ်လောက် လိင်ဆက်ဆံနှုန်း ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
အခုလို လိင်ဆက်ဆံမှုတွေ လျော့ကျသွားရတာဟာ အိမ်အလုပ်တွေ၊ ကလေးထိန်းနေရတာတွေအပြင် တိုးတက်လာတဲ့ ဖျော်ရေးရေးကဏ္ဍတွေက အိမ်ထဲမှာ နေရာယူလာလို့ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆန်ဒီရေဂိုတက္ကသိုလ်မှ စိတ်ပညာပါမောက္ခလည်းဖြစ် စာရေးဆရာမလည်းဖြစ်တဲ့ Jean Twenge က ဆိုပါတယ်။ ရုပ်သံအစီစဉ်တွေ ကြည့်ရှုရင်း အပမ်းဖြေတာမျိုးတွေက လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အချိန်တွေကို ရှားပါးသွားစေတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ အတန်ငယ်ဝေးကွာပြီး နေထိုင်ကြပေမယ့်လည်း စစ်တမ်းအရ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေရဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုဟာ တစ်နှစ်လျှင် ပျှမ်းမျှ ၅၄ ကြိမ် သို့မဟုတ် တစ်ပတ်ကို ၁ ကြိမ်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။ တစ်မိုးအောက်မှာ နေကြတဲ့ လင်းမယားတွေမှာတော့ တစ်နှစ်မှာ ၅၁ ကြိမ်လောက်ပဲ ရှိနေပါတယ်။
ပျော်ရွှင်မှုကို အပြည့်အဝခံစားရဖို့ဆိုရင် တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက် လိင်ဆက်ဆံတာဟာ ကောင်းတဲ့အပြုအမူဖြစ်ကြောင်း ကနေဒါနိုင်ငံ ယော့ခ်တက္ကသိုလ်မှာ လက်ထောက်ပါမောက္ခ Amy Muise က ဆိုပါတယ်။
စုံတွဲတွေကြားမှာ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတာဟာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီးပျော်ရွှင် ကျေနပ်ချင်လို့ တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်မက လိင်ဆက်ဆံတာဟာ သိပ်ပြီး ဆက်စပ်မှုမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သဘောကတော့ တစ်ပတ်မှာ အကြိမ်ကြိမ် လိင်ဆက်ဆံပေမယ့်လည်း ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စိတ်က သိသိသာသာတိုးလာတာမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။
ဒါကြောင့်မို့ ချစ်တင်းနှောခြင်း (သို့မဟုတ်) လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို လင်မယား စုံတွဲတွေကြားမှာ ခန္ဓာကိုယ်ရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက်နဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းသုခ ပြည့်စုံစေဖို့ အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။